Marcus Hutchins oo ah wiil British ah oo dunida ka badbaadiyay weerarkii " madax furasho" - Horn Future
London –Wargeysyo British ah ayaa waxa uu daaha ka faydeen magaca nin dhallinyaro ah oo ka hortaggay weerarkii elekronik ga ee ay la kulmeen 150 wadan oo dunida ah kaas oo lagu loogu magac daray ” madax furasho,”.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Independent” ee British ka ah ayaa waxa uu sheegay in ninkan dhallinyarada ah oo magaciisa la yidhaahdo Marcus Hutchins uu ku kacay in uu helo khaanadd ka banaan habka weerarkan “WannaCry” oo ah virus ka sababay weerarkan, kaas oo ay ugu yeedhay “Hero,” ama geesi warbaahintani.
Waxa wargayskani sheegay in ninkan dhalinyarada ah uu xakameeyay dhibaatadii , is-dhexyaacii iyo falalkii dabinka ahaa ee elektronik ga kaas oo juquraafi ahaan gaadhay Yurub, Latin America, qaybo ka mid ah Asia iyo Maraykanka.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Daily Mail”, Hutchins oo da’diisu ay tahay 22 jir ayaa isagu aanan galin waxbarasho jaamacadeed,waxana dhacday in la joojiyo waxbarashadiisa sanadkii 2010 kadib markii si khaldan loogu eedeeyay in uu u jabsaday xogta qarsoodiga ah ee la xidhiidha dugsigii uu wax ka baran jiray.
Waxa ninkan dhalinyarada ah uu ka helay waayo aragnimada farsamadiisa ku saabsan ammaanka computer ka isku dayadiisa uu ka bartay (blog)giisa gaarka ah ee internetka.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Hutchins oo ku nool xagga Xeebta Waqooyi ee “Devon” ee dalka Britain uu imika ahaan ka howlgalo Xarunta Amniga Qaranka ee Amniga Internetka si uu uga hortaggo una joojiyo hore-umarinta faca cusub ee barnaamijyada tuugada ee loo adeegsado jabsiga xogaha qarsoodiga ah.
Dhinac kale wargeyska The “The Guardian” oo soo xigtay qoraal uu ku qoray Twitter kiisa ninkan dhalinyarada ah oo aynan joogto ahayn hawlaha shaqo ee uu ka hayo shirkad qaabilsan ammaanka elektroni ga oo kutaala California ku dhowaad muddo sannad ah ,ayaa waxa uu ku qoray “Twitter” kiisa: “Waxaan sameeyey xitaa saaxiibadayda runta ah kama war qabin,sida (blog) gayga ama boggeyga ” Twitter “ka,xitaa howsha aan qabto iyo meesha aan ka shaqeeyo, “.
Waxa uu hadalkiisa raaciyay oo uu yidhi: “Waxaan aaminsanahay tan iyo maanta in aan noqon doono qof ay xiiseeyaan qoyskayga iyo saaxiibaday,”.
Waxa xusid mudan in tobanaan kun oo computero ah oo dunida dacaladeeda yaala ay la kulmeen weerar Jimcihii la soo dhaafay, kaas oo sababay inay xidhmaan xogta computerada uu saameeyay (password) la galiyay.
Kooxda weerarkan masuulka ka ahayd oo aanan ilaa imika la garanaynin ayaa waxa ay codsatay tiro lacageed oo u dhaxaysa $300 ilaa $600 oo dollar si qalabkoogu ugu soo noqdaan in si caadi ah ugu shaqeeyo.
« Qaramada Midoobay oo sheegtay in laga cabsi qabo in 20 qof ay ku dhinteen Mediterranean ka	» China oo ku rakibtay qalabka gantaalaha Koonfurta Badda China ee lagu muransan yahay